Baadhe iyo saynisyahan Somali ah oo si dabiiciya ku daaweeyay Karoona - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Baadhe iyo saynisyahan Somali ah oo si dabiiciya ku daaweeyay Karoona
Baadhe iyo saynisyahan Somali ah oo ku nool Kiiniya waxna ka dhiga jaamacad ku taal Kiiniya ayaa sheegay inuu soo saaray daawo looga hortagayo hargabka Karoona oo dabiiciya.
”Daawo dhaqameedka anaa soo saaray waxana kadib iga minguuriyay nin ku nool Woqooyiga Bari Kiiniya kadibna waxaan go’aansaday inaan anigu iibiyo si tayadu u lumin ayuu yidhi Prof Maxmed Xuseen Cabdulle.
Nin daawo dhaqameedkan la siiyay oo Kiiniyaati ah ayaa sheegay inuu ku bogsaday markii uu qaatay isagoo aan gelin isbitaal. Wasaarada caafimaadka Kiiniya ayaa sheegtay inayna ogeyn inay jirto daawo dhaqameed.
”Ma ogin daawo dhaqameed daawo u ah hadayse jirto aad ayaan u soo dhaweynaynaa ayuu yidhi gudoomiyaha ka hortaga cudurada faafa.
”Ilaa hadda waxaan sameeyay 500kg oo daawada ah ayuu yidhi Prof Maxamed Xuseen Cabdulle. Waxay igu qaadatey lix bilood inaan soo saaro daawadan, waxana si gaara aan uga faaiidey khibrad aan ka helay Shiinaha.
”Waxaan diyaar u ahay inaan difaacdo nooca daawo ee aan soo saaray ayuu yidhi PrOF Maxamed oo aan noqonayn qofkii ugu horeeya ee daawo dhaqameed sameeya.
Ciidanka Itoobiya oo Tigreega ka eryay tuulooyin badan
Ciidanka Itoobiya ayaa tuulooyin farabadan oo Tigreegu ka ...
Jaamacada Jigjiga oo bilaabaysa dhigasho aad u muhiima
Jaamacada Jigjiga ee dawlada Somali galbeed ayaa bilaabaysa ...
Rooble oo Farmaajo ka baryay inuu aqbalo 30 jir 30 milyan haysta
Raiisal wasaaraha lagu khasaaray ee guntiga u giijiyay ...
Kooxda beesha caalamka oo hoosta ka diidey qorshaha amniga ee Somaliya wadato
October, 19, 2021
Kooxda beesha caalamka ayaa diidey qorshaha amniga ee ...
Mustafe Cagjar oo raba inuu maamulkaba ka sifeeyo Samaroon
Horjoogaha Somali galbeed Mustafe Cagjar ayaa raba inuu ...
Daawo: Shariif sh Axmed oo u calaacalay Kiiniya: In maxkamad la geeyo maahayn
Madaxweynihii ku meel gaadhka ahaa ee ka masuulka ...
September, 23, 2021
Ankara’s ties with Washington remain “not healthy,” as ...
Saddex dal oo Muslima oo dhoolatuskooda milatari isha lagu hayo
September, 13, 2021
Waxa dalkaasi Aserbajaan ka bilaabmi doona dhoolatus milatari ...
Dr C/raxmaan Bayle oo khashifay warqad uu soo saaray gunti giijiye Rooble
Wasiirka maaliyada dawlada dhexe ayaa khashifay warqad uu ...
Madaxweynaha oo markale saxay jar iska tuure Maxamed Xuseen Rooble
September, 8, 2021
Madaxweynaha Somaliya ayaa sharci daro ku tilmaamay xilka ...
Maxaabiis Falastiina oo ku xirnaa jeelka Yuhuuda ugu adag oo si layaable uga fakadey
September, 6, 2021
Jalbuus waa jeelasha Yuhudu ku faanto ee ugu ...
Madaxa sirdoonka qaranka oo si cilmiyaysan ugu jawaabay wasiirka koowaad
September, 5, 2021
Madaxa sirdoonka qaranka oo siyaasiyiinta beesha Hawiye muddo ...